China Multi fitrandrahana beton, fitrandrahana kapila tanimanga, fitrandrahana alika, fandavahana telozoro, fantsom-pitrandrahana fitaratra, fantsom-pitrandrahana rindrina, fananganana orinasa ary mpanamboatra | Boda
Fitrandrahana simenitra marobe, fitrandrahana taila vita amin'ny seramika, fantsom-pitrandrahana alikaola, fandavahana telozoro, fantsom-baravarankely vera, fantsom-pitrandrahana rindrina, fantsom-pitrandrahana titanium
Ny bitika fandavahana dia mahazatra amin'ny fiainantsika andavanandro, saingy maro ny olona mety tsy mahalala ny famaritana ny fandavahana. Raha ny marina dia misy karazany maro ny bitsika fandavahana, izay manavaka indrindra arakaraka ny fampiasany azy, izany hoe, karazana bitika inona no tokony hatao. Ny fantsom-pandavahana mahazatra dia misy fandavahana fihodinana, fandavahana fisaka, fandavahana lavaka lalina, fanamboarana, fametahana fantsona, fandavahana afovoany sns.
BOSENDA Bitsika boribory boribory boribory marolafy / Boroka boribory / Boribory boribory vato marbra, izay mateza, miaraka amin'ny lelan-tsilo maranitra, fanesorana puce malefaka miaraka amina fandidiana mora. Ny fanesorana ny puce effets effetive be, ny ampahany amin'ny vatana milamina, tsy mifikitra amin'ny antsy, ny fandavahana tsara kokoa ary maharitra ny fiainana.
Ny bitsika fandavahana dia azo ampiasaina amin'ny fandavahana tanana sy visy ho an'ny herinaratra, ho an'ny fandavahana keramika, taila vita amin'ny keramika, fitaratra ary zavatra vita amin'ny hazo. Izy io dia manana ny fiasan'ny fitrandrahana tantanana elektrika, ary afaka manokatra lavaka amin'ny rindrin'ny simenitra ihany koa. Ny kofehy telozoro izay mifamatotra mafy kokoa amin'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra fa tsy mora solafaka.
Famaritana avy amin'ny 3-12mm, ny vokatra mampiasa fitaovana karbida simenitra avo lenta.
Ny tady boribory volamena titanium dia mety amin'ny fandavahana tanana elektrika, familiana fandavahana, biraon'ny birao, fandavahana fisaka sns. Tsara kokoa ny manampy rano hampangatsiaka azy rehefa mampiasa, mba hialana amin'ny vokadratsin'ny hafanana ambony amin'ny vokatra.
Ny haben'ny vokatra / ny halavany / ny halavany / ny savaivony / ny lanjany dia toy ny etsy ambany:
Previous: Vodin-tsolika manify
Manaraka: Davaran-dàlana, fitrandrahana dingana vita amin'ny titane, fitrandrahana fantsom-bokotra hexagonal, fandavahana kely